ကျွန်ုပ်တို့၏ ebook ကိုထုတ်ဝေရန်မည်သည့် ebook အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ရမည်နည်း။ | eReaders အားလုံး
ကျွန်ုပ်တို့၏ ebook ကိုထုတ်ဝေရန်မည်သည့် ebook အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ရမည်နည်း။
ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ဝေမှုသည် ebook ထုတ်ဝေခြင်း၏အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ဝေသည့်ပလက်ဖောင်းများအပြင်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဝေသော ebooks များကြီးများနှင့်ထုတ်ဝေသူများနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းကိုဘေးဖယ်ထားသည်။
e-book တစ်ခုထက်ပိုသောပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်စာရေးသူအတွက်သူကိုယ်တိုင်ထုတ်ဝေသည့်ပလက်ဖောင်းတွင်သူဘာလုပ်ရမည်ကိုသိပြီးဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောသုံးစွဲသူများအတွက် သင့်ရဲ့ ebook ထုတ်ဝေရန်အတွက် ebook format ကိုရွေးချယ်ခြင်း စာရေးဆရာသည်ပရိသတ်များအားလုံးသို့ရောက်လိုသောကြောင့်၎င်းသည်အသုံးအများဆုံးခေါင်းခဲနာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လား?
ယခု ကျွန်တော်တို့သုံးနိုင်တဲ့ပုံစံသုံးမျိုးရှိတယ်သို့သော်၊ ဤ ebook အမျိုးအစားများကို eReaders အားလုံးတွင်မတွေ့ရပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ebook ပလက်ဖောင်းများစွာကိုရွေးချယ်ခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ပုံစံတည်းဖြင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့်အခြားပုံစံများသို့ပြောင်းလဲခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။
လူကြိုက်အများဆုံး ebook အမျိုးအစားမှာ Epub ဖြစ်သည်အသုံးပြုသူသည်စာဖတ်ခြင်းကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်သာမကပိုမိုကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲရန်ခွင့်ပြုသည့် eReaders နှင့်လိုက်ဖက်သည့်စာအုပ်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးထွက် Epub ဗားရှင်းကသင့်အားအသံနှင့်ဗွီဒီယိုများထပ်ထည့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အကျယ်ပြန့်ဆုံးပုံစံဖြစ်ပြီး Kobo, Apple, Google Play Books, Barnes & Noble, Casa del Libro, Aldiko စသည်တို့ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းမှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ တစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်မှာအမေဇုံဖြစ်သည် နှင့်သင်၏ Kindle ။
Amazon မှာ Epub ebook format ကိုနှစ်သက်တာမဟုတ်ပေမယ့် format နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ tools တွေရှိတယ်
အမေဇုံထုတ်ကုန်များနှင့်၎င်းတို့၏အက်ပလီကေးရှင်းများသည်များသောအားဖြင့် Epub format ကိုဖတ်ရန်တွန့်ဆုတ်လေ့ရှိသည်။ အဲဒါကြောင့်ပဲ အမေဇုံပလက်ဖောင်းသည် AZW အမျိုးအစားကိုအသုံးပြုသည်eReaders နှင့်အွန်လိုင်းစတိုးအများအပြားမှအသိအမှတ်မပြုသောပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။
တတိယအကျော်ကြားဆုံး ebook အမျိုးအစားသည် အဆိုပါ pdf, မူလက ebook မဟုတ်သော်လည်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ebook အဖြစ်အသုံးပြုသောပုံစံဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အခြား ebook အမျိုးအစားများနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ အဆိုပါ pdf ကိုသူတို့ထက်ပိုပြီးအသုံးပြုသည်ဒါပေမယ့် eReaders တွေအတွက်အနည်းဆုံးတော့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးထားတာလည်းအမှန်ပဲ။
အကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာ ebook တစ်ခုကိုထုတ်ဝေပြီး platform အမျိုးမျိုးကိုယူဆောင်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ အကောင်းဆုံးကတော့ Epub ebook format ကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပုံစံနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိရိယာတစ်ခုမှကျေးဇူးတင်လွှာ azw format သို့ပြောင်းနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ebook အယ်ဒီတာကိုသုံးပါက pdf format သို့လည်းတင်ပို့နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုထုတ်ဝေရန်အကောင်းဆုံး ebook အမျိုးအစားသည် EPUB ဖြစ်သည်။
သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ? Epub ကိုအကောင်းဆုံးပုံစံလို့ထင်သလား၊ ဒါမှမဟုတ် AZW format ကိုပိုကြိုက်သလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » Software များ » ကျွန်ုပ်တို့၏ ebook ကိုထုတ်ဝေရန်မည်သည့် ebook အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ရမည်နည်း။
Epub သည်အခြေခံစံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ မဟုတ်လျှင်အမေဇုန်တွင်ပြောင်းလဲခြင်းကိရိယာရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ePub3 ဗားရှင်းတိုးတက်ပုံကိုအနာဂတ်ဆောင်းပါးများအတွက်သင်စဉ်းစားထားလားကြည့်ရအောင်။ Adobe သည်ဒီဇိုင်းကိုတိုးတက်စေရန်အကြံဥာဏ်ကိုသိလို။ ဖြစ်သည်။